Filtrer les éléments par date : mercredi, 04 septembre 2019
mercredi, 04 septembre 2019 21:50
Malagasy voaroaka tany Kaomôro: Tsy manana taratasy hiditra sy hivahiny any ny ankamaroany
Nanao fampahafantarana ny Ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy fa efa mandeha ny fanadihadiana momba ireo teratany Malagasy voaroaka tatsy amin’ny nosy Kaomôro.
Ny ampahany amin’ireo teratany malagasy voakasik’ity raharaha ity dia tsy manana ny taratasy fahazoan-dalana hiditra sy hivahiny any Kaomôro. Ny sasany dia manana izany taratasy fahazoan-dalana izany mazava tsara, saingy tsy ara-dalàna ny antontan-taratasy hiverenany an-tanindrazana, izay tsy maintsy ananana eo am-pelantanana mandrakariva mandritra ny fotoana ivahinianana any ivelany.
mercredi, 04 septembre 2019 21:41
Sambava: Raim-pianakaviana maty tampoka raha hiakatra fitsarana
Tranga nanaitra ny maro no sady nampalahelo ny nahazo an'i Mosesy, 96 taona, raha nitambotsotra tampoka teo amin'ny lalantsaran’ny Fitsarana Antalaha, teo ampiandrasana ny minitra hijoroany eo anetrahan'ny fitsarana ny 02 septambra 2019. Raharaha fananantany no nitorian'ny mpanambola azy tao Andratamarina, Distrikan’i Sambava.
Tsy misy tsy mahafantatra fa an’i Mosesy ny tany tao Andranohely, ary misoratra amin'ny anarany. Ny Alakamisy lasa teo dia nisy Zandary tonga teny an-toerana ka nampiantso azy sy ny zanany ary zafiny mba ho tonga ao amin'ny biraon'ny Kaominina Andratamarina ny marainan’ny zoma 30 aogositra 2019 mba hanaovana fanadihadiana. Naharitra adiny telo izany .
mercredi, 04 septembre 2019 20:07
Fonjan’i Tsiafahy: Tsy mbola voatsara ny 2/3-n’ny voafonja tazomina ao
1214 no isan'ny voafonja ao Tsiafahy, raha ny antotanisa hatramin’ny androany, ny 423 amin'izy ireo ihany no efa voatsara ka manefa ny saziny.
Naorina tamin'ny 1978 ity fonjaben’i Tsiafahy ity, ary natao handray voafonja 350. Tany ampiandohana dia ireo efa voatsara noho ny heloka bevava vitany, no manefa ny saziny ao, tsy izay no zava-misy ankehitriny fa tsy mbola voatsara avokoa ny 2/3-n’ny voafonja tazomina ao.
mercredi, 04 septembre 2019 20:01
Basikety N1A: Fiadiana ny tompondaka nasionaly
Hanomboka rahampitso alakamisy 5 septambra 2019 ao amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina, ary hitohy hatramin’ny 15 septambra 2019 ny fiadiana ny tompondaka nasionaly amin’ny taranja basikety, sokajy lahy sy vavy.
Nisy androany ny fivoriana teknika ho fiatrehana izany.
mercredi, 04 septembre 2019 19:58
Festival Karitaky: Hatao ao Ranohira ny andiany faha-11
Hotanterahina ny 17 ka hatramin’ny 21 septambra 2019 ho avy izao ao Ranohira, Faritra Ihorombe ny Festival Karitaky andiany faha-11. Hetsika ara-kolontsaina mampalaza ny Bara ny Karitaky, ary natao indrindra isarihana mpizahatany.
mercredi, 04 septembre 2019 19:57
OTIV Boeny: Miandry ny volany ireo mpikambana
Telo volana taorian’ny 7 jona 2019, fe-potoana nomen’ny filoha Andry Rajoelina ireo tomponandraikitra ao amin’ity OTIV (Ombona Tahiry Ifampisamborana Vola) Boeny, navoriny tao amin’ny Lapam-panjakana Ambohitsorohitra ny harivan’ny talata 4 jona 2019, natrehin’ny solontena roa, avy amin’ny Vaomiera mpanaramaso ny banky sy sehatra fampindramam-bola, nandrosoan’izy ireo ny drafitra hamerenana ny volan’ireo mpikambana mitaraina fa very vola na mihitsoka tsy azo ao amin’ny OTIV Boeny ny tahirim-bolany efa aman-taonany izao, milaza ho tsy mbola nahazo ny volany ireo mpikambana, no tsy manam-baovao mikasika izany.
Resaka ampahibemaso teo anoloan’ny Lapan’ny tanànan’i Mahajanga tamin’ny 23 mey 2019 no nahatongavana tamin’ny fivoriana tao amin’ny Lapam-panjakana Ambohitsorohitra ny harivan’ny 4 jona 2019, ka namaritana ny fe-potoana hatramin’ny 7 jona 2019 hanomezana vahaolana. Miandry ny fanatanterahana izany vahaolana izany izahay, hoy ireo tompom-bola.
mercredi, 04 septembre 2019 19:33
Tafika anabakabaka Malagasy: Miampy telo ireo mpanamory angidimby
Nisy, omaly, ny lanonana namoahana tamin’ny fomba ofisialy mpanamory angidimby, notanterahina tao amin’ny foiben’ny Tafika anabakabaka Malagasy – Ivato Antananarivo. Manamboninahitra telo mirahalahy avy amin’ny Tafika anabakabaka Malagasy izy ireo, no nahavita fiofanana ka notolorana mari-pahaizana.
Notsiahivin’ny Praiminisitra Ntsay Christian fa tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny fametrahana ny fandriampahalemana sy ny fitoniana ny fampitaovana sy fanatsarana ny fahaiza-manaon’ny mpitandro ny filaminana amin’ny ankapobeny, ary voakasik’izany ny Tafika anabakabaka.
Nohazavain’ny Praiminisitra fa fampiharana ny paikady ho amin’ny fampandriana ny fahalemana ny nametrahana toby miaramila maro manerana ny Nosy, ka ahafahana manamora sy manafaingana ny fifandraisana an’ireny toby ireny ny fitaovana toy ny fiaramanidina na ny angidimby.
mercredi, 04 septembre 2019 19:20
mercredi, 04 septembre 2019 19:16
Antananarivo renivohitra: Hiato avokoa ireo asa fanamboaran-dàlana
Nanao fampitam-baovao ny ministeran’ny Fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny Asa vaventy fa dia « hiato avokoa ireo asa fanamboaran-dàlana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina manomboka ny zoma 06 septambra 2019 hatramin’ny talata 10 septambra 2019 ».
Noraisina ny fepetra « hisorohana ny fitohanana sy hahamora ny fandaminana ny fifamoivoizana mandritra ny fivahinianan’i Papa Ray Masina eto amintsika », hoy hatrany ny fampitam-baovao.
mercredi, 04 septembre 2019 19:13
RN34 Morondava: Foza 75kg tra-tehaky ny Zandary
Mihidy ny fotoam-panjonoana foza na drakaka eo anelanelan’ny 10 aogositra ka hatramin'ny 31 oktobra 2019. Mbola misy hatrany anefa ireo mihaza. Tsy fahafantarana lalàna sa fanahy iniana ?
Omaly talata 03 septambra 2019, tamin'ny 3 ora tolakandro, dia foza 75kg be izao no tra-tehaky ny Zandary avy ao amin'ny Brigade de la Police Routière Miandrivazo, tao Bemanonga Morondava amin’ny lalam-pirenena faha-34.
Nafenina tao anaty gony izy ireo. Nandritra ny fanadihadiana nataon’ny Zandary no nahalalana fa nalaina avy any Marofandilia ireo foza ireo. Taorian’izay dia nomena an'ny Biraom-paritry ny Jono any an-toerana ny raharaha.
Mbola velona ireo foza ka dia naverina haingana any amin'ny honahona (mangroves) niaviany izay ahafahany miaina sy mitombo.